Etu esi egbochi data na Wi-Fi na ngwa na Xiaomi ma ọ bụ Redmi | Gam akporosis
Enwere oge mgbe anyị achọghị ịnata ozi WhatsApp ma ọ bụ Telegram, dịka ọmụmaatụ. Ọ nwere ike ịbụ naanị n'ihi na anyị chọrọ ilekwasị anya n'ihe ma zere ndọpụ uche, nke ga-esiri anyị ike ma ọ bụrụ na anyị ahụ ọkwa sitere na ngwa abụọ a kpọtụrụ aha-ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ngwọta nke a ga-abụ gbanyụọ data mkpanaka nke ekwentị na / ma ọ bụ kwụsị Wi-Fi, mana nke a abụghị ihe bara uru ebe ọ na-eme ka anyị kwụsị kpamkpam.
Ọ dabara nke ọma n'ígwé dị ka Xiaomi MIUI nwere nwa afọ nhọrọ, kemeghi si Nhazi, nke na-enye ohere igbochi data nke ngwa ahọpụtara na Xiaomi ma ọ bụ Redmi, si otú ikwe gị iji data ma ọ bụ Wi-Fi na ndị ọzọ ngwa ọdịnala na anyị anaghị nanị.
Machibido data ngwa na Xiaomi ma ọ bụ Redmi dị ka ndị a
Nzọụkwụ 3 (ngwa ọ bụla tozuru)
Ọ dị mfe. Ga-enweta NhaziMa ọ bụ site na logo nke dị na otu n'ime ụlọ ákwà na / ma ọ bụ site na ngosi mmanya, site na logo na-amata dị ka a gia.
Ozugbo e, ị nwere ike ịnweta Jikwaa ngwa na uzo, dika edere dika odi Jikwaa ngwa na ogwe ọchụchọ. Thezọ ntuziaka ga-abụ ịchọ igbe ahụ Aplicaciones, nke dị na igbe dị na nọmba 18 (na MIUI 11); site ebe ahụ anyị nwere ike ịnweta ngalaba ahụ anyị kwuru na mbụ nke mmasị.
Ihe ndi ozo bu mfe peasy. Only ga-ahọrọ otu ma ọ bụ ngwa niile ị chọrọ igbochi ohere ịnweta data mkpanaka yana / ma ọ bụ Wi-Fi. Mgbe ahụ, anyị ga-abanye na windo ọzọ, nke nhọrọ ahụ gosipụtara Machibido ojiji nke data. Emekarị nhọrọ Wi-Fi y Data ekwentị ga-arụ ọrụ; ọ bụrụ na anyị agbanyụọ otu ma ọ bụ abụọ, ngwa ahụ agakwaghị enwe ike ijikọ na netwọk nke nhọrọ a na-enyochaghị. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịga n'ihu na-ele vidiyo na YouTube ma ghara ịnata ozi ọ bụla ma ọ bụ ọkwa sitere na ngwa ngwa ngwa ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Etu esi egbochi data na Wi-Fi na ngwa na Xiaomi ma ọ bụ Redmi